Rista Basnet (रिस्ता बस्नेत)
Topic: Rista Basnet (रिस्ता बस्नेत)
Author Topic: Rista Basnet (रिस्ता बस्नेत) (Read 6255 times)
« on: September 08, 2015, 03:04:31 PM »
Re: Rista Basnet (रिस्ता बस्नेत)
« Reply #1 on: August 06, 2016, 03:00:04 AM »
मेरो त लक्ष्य नै हिरोइन बन्ने थियो
‘होस्टल’ नामक चलचित्रमार्फत नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पदार्पण गरेकी नवोदित नायिका रिस्ता बस्नेतको पछिल्लो चलचित्र लुकामारीले अपेक्षित व्यापार गरेको अनुभूति चलचित्र उद्योगले गर्न नसके पनि नायिका बस्नेतको कामको भने सराहना भएको छ ।
बाल्यकालदेखि नै चलचित्रमा अभिनय गरेर आफ्नो परिचय स्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेकी रिस्ताले हालसम्म जम्मा ६–७ वटा फिल्ममा मात्र काम गरेकी छिन् भने अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा आफू अब कामको मामलामा केही ‘चुजी’ बन्न लागेको बताउँछिन् ।
फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न उतारचढाव र अफवाहको सिकार हुनुपर्छ भन्ने बोध आफूलाई भएको दाबी गर्ने उनी नकारात्मक कुरालाई पनि सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजे सफलताको खुड्किलो चढ्न सजिलो पर्ने मान्यता राख्छिन् । व्यवधानहरू चिर्दै एक दिन आफूले नेपाली सिने क्षेत्रमा अलग पहिचान स्थापित गरिछाड्ने अठोट बोकेकी रिस्तासँग गरिएको छोटो कुराकानी :
० कस्तो चलचित्र हो लुकामारी ?
– नामकै कारण सिनेप्रेमी दर्शकको दिल–दिमागमा बसेको चलचित्र हो यो । यो एउटा सस्पेन्स थ्रिलर र डार्क कमेडी पनि हो भन्न रुचाउँछु । यो चलचित्र हेरेर हलबाहिर निस्कँदा सबै हाँस्दै–रमाउँदै निस्कन्छन् । सोसियल म्यासेज पनि छ यसमा । सौगात मल्ल, कर्मा शाक्यहरूको फ्यानले त छुटाउनै नमिल्ने फिल्म हो ।
० रिस्ताको भूमिकाचाहिँ कस्तो छ नि ?
– छोटो मीठो भूमिका छ । होस्टलपछि आशा गरेको मूभि हो यो मेरो ।
० तपाईंले किन यो क्षेत्रलाई चुन्नुभयो ?
– फिल्म क्षेत्रमा एक्कासि आएको होइन म, बाल्यकालदेखि नै मलाई प्रभाव पारिसकेको थियो । मेरी मामु पनि फिल्म इन्डष्ट्रीसँग जोडिएको व्यक्ति हुनुभएकोले मेरा लागि नेपाली फिल्म क्षेत्र बिरानो रहेन । सानैदेखि सुटिङ हेर्न जाँदा कलाकारले लगाएका कस्ट्युम, गरेको मेकअप आदिले प्रभाव पाथ्र्यो । म पनि यस्तै राम्रा कपडा लगाएर, यसरी नै मेकअप गरेर चिटिक्क पर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तै राम्रो गीतमा गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । भविष्यमा हिरोइन बन्छु भन्ने मलाई लागेको थियो र मामुले पनि छोरीलाई हिरोइन नै बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो ।
० पहिलोचोटि क्यामेरा फेस गर्दाको अनुभूति ?
– म सात–आठ वर्षको हुँदा दोस्रोचोटि बनेको जीवनरेखा फिल्ममा मैले सानो भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ । नीर शाहजस्तो सुपर पर्सनालिटीसँग डायलग बोल्दा खुट्टा काँपिरहेको थियो, तर डराई–डराई भए पनि डायलग बोलेँ । यस्तो अनुभव सानैमा गरेकीले होला ‘होस्टल’को बेलाचाहिँ खासै क्यामेराको फिल नै भएन ।
० ‘अर्धकट्टी’मा पनि काम गर्नुभयो, फिल्म त त्यति चलेन क्यारे ?
– त्यो फिल्म व्यावसायिक रूपले त्यति सफल नभए पनि उक्त फिल्म गर्दाका एकदम रमाइला अनुभवहरू धेरै छन् मसँग । मिहिनेत पनि धेरै गरेँ । रमाइलो टिम थियो । त्यो फिल्मले धेरै सिकाएको छ, सुरुवाती चरणका यी चलचित्रहरू म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ ।
० आजकाल त नेपाली चलचित्रमा पढेलेखेका नायिकाहरू प्रशस्तै आएका छन्, कस्तो लाग्छ ?
– यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । चलचित्र क्षेत्रप्रति रुचि राख्नेहरूले यस्ता टिप्पणी गरिदिँदा खुसी पनि लाग्छ । वास्तवमै नेपाली फिल्म हेर्नुपर्छ भनी कुरेरै बस्ने दर्शकको जमात ठूलै भइसकेको छ । त्यसैले अब यही क्षेत्रमा रहेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास कलाकर्मीहरूमा पलाएको छ ।
० स्कुल जमानाको कुनै खास मेमोरी ?
– स्कुलमा टिचरले ठूलो भएपछि के बन्ने भन्ने प्रश्न गर्दा साथीहरू कसैले इन्जिनियर, कोही डक्टर, कोहीचाहिँ पाइलट बन्ने भने, तर मैले त जुरुक्क उठेर ‘हिरोइन बन्ने’ भनिदिएँ । ‘ए † तँ हिरोइन बन्ने भन्दै सबै हाँसे । अहिले फर्केर हेर्दा ती साथीहरू डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर हुन त सकेनन् तर मैलेचाहिँ भनेकै कुरा पूरा गरेँ । रिस्ताले आफ्नो उद्देश्य चाँडै नै हासिल गर्न सकी भन्छन् यतिबेला साथीहरू ।
० तपाईंको खास हबी के छ नि ?
– गीत गाउन, नाच्न एकदमै मन लाग्छ । स्कुलेजीवनमा त टेबुलटेनिस पनि खेल्थेँ । हरेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुने मेरो स्वभाव नै थियो ।
० रिस्तालाई मनपर्ने तीन नायिकाको नाम लिनुपर्दा ?
– करिश्मा मानन्धर, प्रियंका कार्की र नम्रता श्रेष्ठ ।
० नायक नि ?
– राजेश हमाल, उहाँ हिरो मात्र होइन, यस्तो जेन्टलम्यान त मैले अरू कोही देखेको छैन । अनि सौगात मल्ल मनपर्छ लुट फिल्म हेरेदेखि नै । अर्कोचाहिँ .. कर्मा शाक्य ।
० फिल्म क्षेत्रमा लागेपछि खासगरी नायिकाहरूले अनेक झुटा लाञ्छना पनि व्यहोर्नुपर्छ भनिन्छ, तपाईंलाई त्यस्तो कुनै अनुभव छ ?
– मैले त्यस्तो नकारात्मक परिस्थिति खासै व्यहोर्नुपरेको छैन, तर अनेक इस्यु आउँछ मूभि लाइनमा । नकारात्मक कमेन्ट आए पनि सकारात्मक रूपले ह्यान्डिल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।